खनियाको खतराकार्कीको चर्चा आज गरिरहनु परेन, तर खनियाको नियुक्तिबारे कडा आपत्ति जनाउनुपरेको छ। उनी अरूको लेखन, अनुसन्धान तथा कृति आफ्नो भन्दै बिकाउने व्यक्ति हुन्। अंग्रेजीमा उनले गरेको प्रमाणित चोरीलाई ‘प्लेजरिजम्’ भनिन्छ, र लेखक केदार शर्माको शब्दमा प्लेजरिस्टलाई ‘कृतिचोर’ भन्नु उपयुक्त हुन्छ।
कृतिचोरलाई नेपालको सबैभन्दा पुरानो र प्रमुख विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाइएको छ। जुन संस्थाको काम निष्ठावान, सक्षम बौद्धिक जगत र शिक्षित ‘वर्कफोर्स’ उत्पादन गर्ने हो, त्यसकै प्रमुख सञ्चालक यस्ता व्यक्ति बनाइए जसले अर्काको अनुसन्धान तथा सामग्री आफ्नो भनेर छपाएको प्रमाणित भएको छ। कृतिचोरीको आरोप र प्रमाण बाहिर आएपछि नैतिकता भएको व्यक्तिले आत्मग्लानिका कारण यस्तो गरिमामय पद लिँदै लिँदैनथे, र थोरै पनि लाज भएको व्यक्तिले स्वस्फूर्त राजीनामा गर्थे। तर यहाँ त खनियाकै स्वर पो ठूलो सुनिन्छ! जानकारहरूका भनाइमा, सुशील कोइरालाले त्रिवि उपकुलपतिको पदमा तीर्थराज खनियालाई मनोनीत गरेपछि उनलाई खनियाको विगतबारे सुनाइएको थियो। उतिबेलाका प्रम कोइरालाका प्रेस सल्लाहकार प्रतीक प्रधान भन्छन्, ‘सुशीलजीलाई प्लेजरिजमको राम्रो ज्ञान भएको भए खनियालाई नियुक्त गर्नु हुँदैनथ्यो।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको बौद्धिक नेतृत्व उत्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख थलो हो। यसलाई आज आएर हाम्रा दलहरूले आफ्नो वफादारी गर्ने व्यक्तिलाई दिने उपहार/दाइजोका रूपमा मात्र लिएका छन्। त्यही सोचअनुरुप खनिया नेपाली कांग्रेसको भागबन्डाअन्तर्गत त्रिविमा अवतरण गरेका हुन्।
त्रिवि उपकुलपतिको छनोट कार्यदक्षता र वरिष्ठता होइन, भागबन्डामा आधारित हुन्छ। त्यसमा पनि खनियाजस्तो समस्याग्रस्त व्यक्ति नियुक्ति हुँदा त्रिविलाई मात्र होइन, नेपालको समग्र बौद्धिक जगतलाई क्षति पुगेको छ। उनको नियुक्तिले त्रिविको अग्रगमनमा तगारो लागेको छ र अन्ततोगत्वा यो नियुक्तिले पूरै राज्यको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अग्रगमनलाई पनि असर पारेकै छ। यो कुरा बुझ्न थोरै कल्पनाशीलताले पुग्छ, खनियाको नियुक्ति तथा पदको निरन्तरता शैक्षिक क्षेत्रको बर्बादी नै हो। नेपालमा हुने गरेको प्लेजरिजमबारे इतिहासकार प्रत्यूष वन्तले सेतोपाटीमा अगस्ट २०१५ मा लेखेका छन्। उनी भन्छन्, ‘नेपालमा पिएचडी र मास्टर्स तहमा थेसिस या पेपर प्रस्तुतिमा व्यापक कृतिचोरी हुने गर्छ। कृतिचोरमाथि सजाय हुनु जरूरी छ, विश्वविद्यालयमा शैक्षिक तथा बौद्धिक स्तर कायम राख्न।’ अफसोच यस्तो उपकुलपति त्रिविले पायो, जो आफैं प्रमाणित कृतिचोर हुन्।
Beyond Plagiarism: How honest research could be promoted in Nepal
खनियाले बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेका टर्कीका रिसर्चर भन्छन् : उनीबाट विद्यार्थीले के सिक्लान्!
कृतिचोर अभियोग तीर्थ खनियाले गरेको चोरी प्रमाणित भएको छ, तर उनी चुपचाप घरै बस्ने व्यक्ति भएको भए यसरी पछ्याउनुपर्ने आवश्यकता थिएन होला। त्रिवि उपकुलपति भएका कारण उनको यो अभियोग सान्दर्भिक र अति गम्भीर हुन पुग्यो, किनकि यसले मुलुकको प्रमुख विश्वविद्यालयको छवि, आत्मबल र भविष्यमा घात पुर्याउँदैछ।
दुई लेखमा झन्डै दुईतिहाइ भाषा, वाक्यांश, हुबहु छन्। कतैकतै अलि फरक देखाउन खनियाले उही शब्द प्रयोगलाई घुमाउरो पाराले प्रस्तुत गरेको देखिन्छ, तर यस्तोमा पनि विचार र प्रस्तुतिक्रम सीधै ‘कपी’ गरेको देखिन्छ। हुँदाहुँदा यदाकदा किलिच्कायाले गलत या अप्ठेरो अंग्रेजी प्रयोग गर्दा पनि खनियाको पेपरमा हुबहु प्रस्तुत छ। एकठाउँमा किलिच्कायाले पाँच वटा ‘बुलेट प्वाइन्ट’ राखेका छन्, ‘अथेन्टिक सामग्रीको परिभाषा’ सबहेड अन्तर्गत, अनि खनियाले पनि ठ्याक्कै त्यही गरेका छन्। किलिच्कायाको पेपरको पुछारमा राखिएका १४ वटा रेफरेन्समध्ये खनियाले १२ वटा राखेका छन्। खनियाले गरेको प्लेजरिजमलाई द रिपब्लिका अखबारले दुई पेपरलाई दाँजेर हाइलाइट नै गरी ‘कपी पेस्ट’ गरेको देखाएको थियो। (हे. तस्बिर, सौजन्य रिपब्लिका।)
आसेपासे राजलेखक केदार शर्मा भन्छन्, ‘हामी खनियाजीलाई यतिको लागि धन्यवाद दिन सक्छौं, कृतिचोरीको वास्तविकता तथा मर्मबारे पहिलोचोटि यति व्यापक चर्चा हुनपुगेको छ। यो उनको ‘देन’ हो। यसअघि अधिकांश नेपालीले ‘प्लेजरिजम’ शब्द सुने–बुझेका थिएनन्।’
(तस्बिर सौजन्य: रिपब्लिका)
बुधबार, मंसिर २२, २०७३ १३:२६:००